Qorshe Ciidanka Burundi looga saarayo SOMALIA oo socda & Uganda oo.. - iftineducation.com
Qorshe Ciidanka Burundi looga saarayo SOMALIA oo socda & Uganda oo..
iftineducation.com – Wargeyska Mail Guardian Africa ee kasoo baxa dalka K/Africa ayaa qoray in mas’uuliyiin ka tirsan dawlada Uganda ay soo jeediyeen in ciidamada dalka Burundi Soomaaliya laga saaro haddii madaxda dawlada Burundi ku adkaystaan inay diidaan in ciidamo nabad illaalin ah wadankaasi la geeyo.
Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan dawlada Uganda oo sheegaya inay lama huraan tahay M/weynaha Burundi uu aqbalo go’aanka ururka midawga Africa ee ciidamo lagu geynayo dalka Burundi oo waayahaan ay rabshadi ka jirto.
Inkastoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in xaaladda dalka Burundi lagu dajinayo haddana waxaa jirta M/weynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu si cad uga soo horjeestay qaraar kasoo baxay ururka midawga Africa 18,kii bishaan oo dhigayay in ciidamada socda Africa Burundi la geeyo.
M/weyne Nkurunziza waxaa uu ku goodiyay Arbacii mar uu ka hadlayay warbaahinta dawlada inay difaacanayaan xaduudahooda ayna la dagaalami doonaan haddii ciidamo wadankiisa la geeyo.
Waa taas tan keentay bay leeyihiin siyaasiin African in dawlada Burundi iyana lagu amro in ciidamadeeda qeybta ka ah howlgalka Midawga Africa ee Soomaaliya ka socda ee AMISOM loo soo gaabsho in Soomaaliya laga saaro.
Wargayska warkaan qoray ee South Africa kasoo baxa waxaa uu sheegayaa in si cadaadis loo saaro dawlada Burundi ciidamadeeda laga saaro ciidamada Q,M ee meelo badan oo Africa ah ka wada howlgalka nabad illaalinta ah.
“Haddii ay dawlada Bujumbura ku adkaysato diidmada go’aanka midawga Africa oo ay ciidamada midawga Africa dhibaatayso waa in iyana lagu qasbaa in ciidamadooda ay Soomaaliya kala baxaan oo ay ka dhex baxaan xeyndaabka nabad illaalinta midawga Africa” waxaa sidaas yiri diblomaasi u hadlay dawlada Uganda oo aan magaciisa la shaacin.
Burundi waa dawlada labaad ee ciidamada ugu badan ka joogaan waxaana ciidamada Burundi ee AMISOM qeybta ka ah ay gaarayaan 5,000 oo askari.
Gabar soomaali ah oo filim galmo ah soo sameysay iyadoo nin cadan ah la ….. daawo
Askari ka tirsan Booliska USA oo Fal fool xun kula kacay Wiil SOMALI AH.